Goolhaye Dida oo kahadlay Tayada Xiddiga Cusub ee AC Milan Lucas Paqueta | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on December 12, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(13-12-2018) Goolhayihii hore Ac Milan Dida ayaa aaminsan Lucas Paqueta inuu si fiican ula qabsan doono Rossoneri, balse wuxuu ka diday in lala barbardhigo saaxiibkiisii hore Ricardo Kaka kaas oo isna wakhti qurux badan ku qaatay garoonka San Siro Stadium.
Xiddigaan da’da yar wuxuu ku imaan karaa Milan adduun dhan 35 Malyan oo Euro, waxaana durba lala barbardhigaa Ricardo Kaka kaas oo isagoo 21-jir ah kusoo biiray kooxda Diovolo, iyadoo ay taasi jirto hadana Dida wuxuu la hadlay Gazzetta dello Sport.
“Waxaan hubaa inuu wax fiican ku qaban doono Ac Milan” ayuu yiri Dida oo la hadlayay wargeyska Gazzetta dello Sport.
“Wakhti yar ayaan ku arkay Flamengo balse wey iiga filnaatay inaan rumeysto awoodiisa iyo sida uu u yahay xiddig tayo leh, waa xiddig xirfad dabiici ah leh oo ay qof walba oo Brazil joogo hadal heyso”
“Si kastaba, waxaan dhihi karaa xawaarahiisa iyo farsamadiisa, wax fiican ayuu ku sameyn karaa horyaalka Serie A-da, in lala barbardhigo Ricky? Maya, balse ma ahan wax ku saabsan tayada”
“Kaka wuxuu ahaa lambar 10, halka aan Paqueta u arko mid si xeel dheer khadka dhexe uga ciyaari kara, sidoo kalana lambar 9 been ah ciyaari kara”
Dhinaca kale Dida wuxuu qiray in badbaadinta Donnarumma ee kulankii Torino laga hadal hayay dalka Brazil.